Didi Chuxing သည် NYSE မှ ပယ်ဖျက် ပြီး ဟောင်ကောင် IPO ကိုစီစဉ် သည် – Pandaily
Didi Chuxing သည် NYSE မှ ပယ်ဖျက် ပြီး ဟောင်ကောင် IPO ကိုစီစဉ် သည်
Dec 03, 2021, 22:20ညနေ 2021/12/07 01:13:29 Pandaily
တရုတ် တက္ကစီ ကုမ္ပဏီကြီး Didi Chuang က ဂရုတစိုက် လေ့လာ ပြီးနောက် သောကြာနေ့က Weibo အကောင့် တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ကုမ္ပဏီသည် NYSE မှ ဖျက်သိမ်း ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ကိုစတင် မည်ပြီးတော့ ဟောင်ကောင် မှာ စာရင်းပြုစု ဖို့ စီစဉ် ထားတယ်။ လွန်ခဲ့သော ငါး လက ကုမ္ပဏီ သည်တရုတ် ဆိုက် ဘာ အာကာသ ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များက ဆိုက် ဘာ လုံခြုံရေး စစ်ဆေးမှုကို ခံခဲ့ရသည်။
မီဒီယာ အချို့ ၏အဆိုအရ Didi Travel ၏ App အချို့ကို Didi Jiayou, Didi-Rider စသည့် Apple Chinese App Store တွင် ရရှိနိုင်သည်။
ရဲ့SECအမေရိကန် စတော့အိတ်ချိန်း တွင် စာရင်း ၀ င်သော တရုတ် ကုမ္ပဏီများသည် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပိုင်ဆိုင် သည်ဖြစ်စေ၊ ထိန်းချုပ် သည်ဖြစ်စေ ထုတ်ဖော် ရမည်ဖြစ်ပြီး စာရင်းစစ် စစ်ဆေး ခြင်း၏ သက်သေအထောက်အထား များ ကိုတင်ပြ ရမည်ဟု ကြာသပတေး နေ့က ကြေငြာခဲ့သည်။ Didi Chuxing သည် SEC ၏စည်းမျဉ်း သစ် များကို ကြေငြာ ပြီးနောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၏ ဖျက်သိမ်း မှုကို ကြေငြာ သည့် ပထမဆုံး တရုတ် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
Didi သည် ဖျက်သိမ်း ခြင်း ကြေငြာ ပြီး ငါးလ အကြာတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၌ စာရင်းဝင် ခဲ့သည်။ ယခုနှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင်Didi သည် NYSE တွင် တိတ်တဆိတ် စာရင်းဝင် ခဲ့ပြီး စတော့ရှယ်ယာ ကုဒ် မှာ “ Didi” ဖြစ်သည်။Didi ၏ပြ price နာ စျေး နှုန်းမှာ ၁၄ ဒေါ်လာ ဖြစ်သည်။ ပထမ နေ့တွင် Didi ၏ စျေးကွက် တန်ဖိုး သည်ဒေါ်လာ ၈၀ ဘီလီယံ အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။
သောကြာ နေ့တွင် Didi Chuang ၏ရှယ်ယာ ဈေး နှုန်းမှာ ၇. ၈ ဒေါ်လာ ဖြစ်ပြီး စျေးကွက် တန်ဖိုး မှာဒေါ်လာ ၃၇. ၆ ၂၁ ဘီလီယံ သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့တွင်တရုတ် ဆိုက် ဘာ လုံခြုံရေး အာဏာပိုင်တရုတ် နိုင်ငံသည် နိုင်ငံ၏ ဒေတာ လုံခြုံရေး အန္တရာယ် များကို ထိန်းသိမ်းရန် အား ထု တ်မှုများ ကိုတိုးမြှင့် လိုက် သောကြောင့် Didi Chuxing သည် ဆိုက် ဘာ လုံခြုံရေး ပြန်လည်သုံးသပ် မှု ကိုစတင် လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ် နေစဉ်,Didi Travels ရဲ႕ app က user အသစ္ မွတ္ပံုတင္ ျခင္းကို ရပ္
ဇူလိုင်လ 4,ဒီး ဒီApp Store မှ ဖယ်ရှား ရန်နှင့် “ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို တရားမ ၀ င် စုဆောင်း ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း” အတွက် ပြန်လည်သုံးသပ် ရန်လိုအပ်သည်။ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေနႛက အြန္လိုင္း စာ ႟ံုး ကေန ထပ္မံ ေဳကညာ ကိုယ္ေရး ကိုယ္ တာ အခ်က္အလက္ေတြကို ဥပေဒနဲ႔ မညီ ဘဲ စုေဆာင္း အသံုးျပဳ တဲ့ ျပႆနာ ေတြေၾကာင့္ Didi ရဲ႕ အပလီ ေကး ရွင္း ၂၅ ခုကို စင္ ေပၚကေန ဖယ္ရွား ခိုင္း ခဲ့တာပါ။ App မွာ Ride, Drive, Finance, Cargo, Distribution, Bus စတဲ့ နယ္ပယ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ကို အက်ံဳး ၀င္ ပါတယ္။
Didi Tour ကို စိစစ္ ၿပီးတဲ့ေနာက္ အြန္လုိင္း ကား ေစ်းကြက္မွာ ကစားသမား အသစ္ေတြ အမ်ားအျပား ထြက္ေပၚ လာခဲ့ပါတယ္။ Mei Tuan သည် တက္ကစီ လုပ်ငန်း ကိုပြန်လည် စတင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Cao Cao Mobile နှင့် T3 Travel ကဲ့သို့သော ဒုတိယ ဆင့် အွန်လိုင်း ကား ငှားရမ်း သည့် ကုမ္ပဏီ ၂၀၀ ကျော် သည်သူတို့၏ မြှင့်တင်ရေး ကြိုးပမ်း မှုများကို အားဖြည့် ပေးခဲ့ပြီး ယာဉ်မောင်း များနှင့် ခရီးသည် များအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ များစွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။ ဇူလုိင္လ အတြင္းက ပုိ႔ေဆာင္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ျပည္တြင္း၌ ေအာ္ ဒါ မွာယူ မႈ သုံး သိန္းေက်ာ္ ရွိသည့္ အြန္လုိင္း ကား အငွား ပလက္ ေဖာင္း ၁၇ ခု ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Tianjin ၏တရားဝင် ဌာနသည် Didi အပါအ ၀ င် ကား ခေါ်ဆိုမှု ပလက်ဖောင်း ကို ခေါ်ယူ ခဲ့ပြီး လိုက်နာ မှုမရှိသော ယာဉ် များစုဆောင်း ခြင်းကို ရပ်တန့် ရန်တောင်းဆို ခဲ့သည်
ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ပို႔ေဆာင္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ ဌာန ရွစ္ ခု ပူးေပါင္း၍ အြန္လိုင္း မွ အငွား ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပ ရန္ စာတမ္း မျှတသော ယှဉ်ပြိုင်မှု ကိုထိန်းသိမ်း ရန်နှင့် ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုစလုံး ၏အ ခွင့် အရေး နှင့်အ ကျိုး စီးပွား များကို သေချာစေရန် အတွက် စာရွက်စာတမ်းများ သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များကို ကြီးကြပ် ရန်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း လက်ဝါးကြီးအုပ် မှုကို သတိပေး ရန်လိုအပ်သည်။
Industry Dec 03 ဒီဇင်ဘာ 7, 2021